Boqolkiiba Muwaadiniinta ayaa raba inay iibsadaan Gawaarida Guriga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 Bursa89% Muwaadiniinta ayaa raba inay iibsadaan Gawaarida Guryaha
07 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
Boqolkiiba muwaaddiniintu waxay rabaan inay iibsadaan baabuurta guryaha
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, ayaa ku dhawaaqay natiijada baadhitaan ugu horeysay sameeyay Car Turkiga. Boqolkiiba 89 muwaadiniinta kaqeyb galaya sahanka ayaa raba inay iibsadaan Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyada Varank, xarumaha wax laga iibsado, saldhigyada lacagta laga qaadi doono, ayuu yidhi. Wasiirada Varank, siinta Turkey qiimaha gaariga waxay noqon doontaa in calaamada u ah heerka ay u tartamaan la xafiiltamaan ee saddexdii bilood ee hore ee sanadkan ayaa sheegay in aasaaskeedii dhigay waxaa ka mid ah warshadda.
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank ayaa la wadaago macluumaad cusub oo ku saabsan baabuur ee Turkey. Adkaynaya in Turkey la mid aad ugu farxay oo dulsaar leh oo ka mid ah muwaadiniinta gaariga show ah Varank, share Turkey ee natiijooyinka sahankan oo ku sameeyay gaariga. Sida laga soo xigtay baadhitaan boqolkiiba 97,6 ka mid ah baabuurta Turkey ayaa waxaa lagu taageeray sheegaya heerka Varank, waxa uu sheegay in 89 boqolkiiba kuwa doonaya in ay iibsadaan.
Wasiirka Varank, bartilmaameedka koowaad ee warshadda; Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in aasaaska la dhigay dhismahiisana laga bilaabay Gemlik qeybtii hore ee 2020, “Mashruuca, shirkaddu waxay u qorsheysay oo qorsheysey 15ka sano ee soo socota qaab xirfad leh. Maalgelintooda ay sameyn doonaan, noocyada ay sameyn doonaan, waxa maalgashi ay u baahan yihiin, sida xeeladaha astaanta u noqon doonaan, dhammaantoodna qorsheysan. Qaab dhismeedka qorshaha, gawaarida ugu horreeya ayaa laga sii dayn doonaa wax soo saarka ballaaran dhammaadka 2022. konu
Wasiir Varank wuxuu sheegay in howsha ay sii wadayaan astaamaha lagu diiwaan gelin karo si waafaqsan naqshadaha wuxuuna yiri, “Howshan ayaa lagu dhameystiri doonaa sanadka gudihiisa. Codsiga dalabka horudhaca ahi wali ma bilaaban isaga oo bixinaya lacag hormaris ah. Tani waxay noqon doontaa habka ay shirkaddu u adeegsan doonto ka dib soosaarka shirkadda.
HALKAN WAA LAGA HELI KARAA
Wasiirada Varank, Turkey ee Baabuurta Initiative Group, sharaxay in marka hore bilaabay tiro balaadhan oo ah cilmi-baarista suuqa shaqada, "ka dibna la xiriira astaanta ah, oo waafaqsan design ah, oo muujineysa sifooyinka Turkish, sidkan kartaa quruunta Turkish, ordi doonaa lid ku ah garoonka caalamiga ah, taas oo si sahlan tahay in la yidhaahdo, Ninkanu, diiwaangelinta Si loo abuuro astaan ​​ah shaqo aad u faahfaahsan ayaa la sameeyaa. Summada ayaa la go'aamin doonaa sanadkaan gudihiisa
Kadib bilaabista dooxada Informatics, Varank wuxuu cadeeyay in codsiyada lagahelay 32 shirkadood oo kusocda howlo kaladuwan wuxuuna tilmaamay in tikniyoolajiyada dhaqdhaqaaqa caqliga badan lagu hormarin doono dooxada Informatics.
Wax soosaarka Mass bilowgii 2022
Wasiir Varank, wasaaradaha ay khusayso si ay u diyaariyaan khariiddada wadada loogu talo galay samaynta kaabayaasha gawaarida ayaa sheegay: altyapı Gaadhigan ayaa diyaar u noqon doona marka gaadhigu saaran yahay suuqa. Shaqada ayaa kusii socota sumadda, howshan ayaa lagu dhameystiri doonaa sanadka gudihiisa. Waxaan ku jirnaa habka soo saarista 100-150 noocyada noocan ah. Waa la baari doonaa. Bilowga 2022, warshadu waxay bilaabaysaa soo saar ballaaran ..
damaanad kaliya ee Turkey Turkey ee gadashada for Enterprise Group Automobile (oo TOGG) quseeya wasiirka ku tilmaamay Varank, "ilaa iyo 2035 kun oo baabuur by 30, ma damaanad qaadi karno shirkad kasta oo soo baxay waxaa ka mid ah." Waxa uu sheegay.
DIIWAANGALINTA DIIWAAN GALINTA
Europe, Russia, United States ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha yar codsiga Turkey ee diiwaangelinta sameeyey Varank Garaaci design gaariga waa, ayaa sheegay in kaabayaasha diyaar u ah inay tagaan marka suuqa gaariga noqon lahaa. (sanayi.gov.t waa)
SNCF waxay la saxiixataa heshiis gaadiidka wadada Comsa ee Isbaanishka si loo helo wadaag 25 ah
82 Boqolleyda Balikesir Waxay dooneysaa Mashruuca Tram Necalku
General Electric iyo Siemens waxay rabaan inay iibsadaan Alstom